Kulamo looga hadlayo dib-u-eegista dastuurka oo ka socda Jowhar. – Breaking News,Business, Kenya, Somalia, Politics, Lifestyle, Sports
Kulamo looga hadlayo dib-u-eegista dastuurka oo ka socda Jowhar.
Wasaaradda arrimaha dastuurka ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, gudigga Baarlamaanka federaalka ee la-sacodka dib-u-eegista dastuurka iyo gudigga madax-banaan ee dib-u-eegista iyo Hirgelinta dastuurka ayaa kulan wadatshi ah la yeeshay ururada bulshada rayidka ee magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle.
Sen Cabdi-qaybdiid iyo Avv Maxamed Cabdalla oo kala ah labada gudoomiye ee guddiyada baarlamaanka iyo gudigga madaxa-banaan ayaa sheegeen in kulankan uu bilow u yahay kulmo kale oo ka dhici doona dhamaan degmooyinka dalka, sidoo kale waxa ay sheegeen in ay cadeeyneyso wadashaqeynta wanaagsan ee ka dhaxeeysa Wasaaradda iyo labada Guddi.
← Maamulka Jubbaland oo Xabsiga u taxaabay xildhibaan Axmed Taajir oo dhawaan Xasaannada lagala noqday.
Maamulka Hirshabeelle oo bilaabay howlgalo lagu furayo jidadka xiran ee labada gobol Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe →